Global Voices teny Malagasy » Sina: Mpisolovava Momba Ny Zon’Olombelona Voatazona Am-ponja Nohadiadiana Momba Ny Fiainana Ara-Pananahana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 31 Mey 2011 16:26 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika Sylvia Aimée
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Fitantanam-pitondrana, Lalàna, Politika, Vehivavy sy Miralenta, Zon'olombelona
Volana vitsivitsy lasa izay, anjatony mahery ny mpahay lalàna momba ny zon’olombelona an-jatony, mafàna fo, mpanoratra ary mpanakanto no voasambotra na nenjehin’ny lalàna tao Sina vokatry ny fifandonana tamin’ny hetsi-panoherana Jasmine . Na izany aza, maro amin’izy ireo no navotsotra, ny ankamaroany tsy nilaza izay zava-nitranga nandritra ny fisamborana azy.
Amin’izao fotoana izao, taorian’ny telo volana nitazonana azy, mpahay lalàna iray avy ao Shangai Li Tiantian (@litiantian ) no sahy nandrava ny fahanginana tao amin’ny twitter. Tao anaty andianà bitsika hatramin'ny 27 sy 28 Mey, nosoritsoritany tsara hoe hatraiza ny fanararaotan’ireo Polisim-pirenena ny fahafantaran’izy ireo ny fiainany manokana ho isan’ny tetikady manokana hampitahoran’izy ireo ny mafàna fo sy ny mpitarika fanehoan-kevitra.
Ilay tahotra tsy voalaza
Ny faha-26 Mey, Tiantian nibitsika hoe:
Navoaka ny hopitaly aho ny 21 Mey, misaotra tamin’ny fanohanana ary miala tsiny fa tara 2 andro ny fiverenako teto anivon'ny aterineto. Tena nanohina ahy ny famakiana ny hafatra nampihetsi-po nalefanareo. Henoko hoe nosamborina i Aiweiwei tamin’ny izaho tany am-pigadrana, tena nalahelo be aho, ary manantena fa alefa hody any an-tranony faran'izay haingana izy.
Ny 27 Mey, nanoratra izy hoe :
Kely raha ny karazana tahotra izay azonao faritana, fa ny karazana tahotra izay tsy vitanao lazaina no lehibe indrindra. Ny voalavo mitalaho eo anoloan’ny saka dia mety tena matahotra be, angamba. Tahaka ny olona iray izay mety ho raiki-pitia amin ‘ny olona iray izay atahorany mafy, angamba. Sarotra ny fahatakarana ny sain’olombelona, ny zavatra iray mahafinaritra dia ny hoe te handresy io tahotra io isika, ary izany no mahatonga antsika hitolona. Tsy vahaolana ny fampitahàna ny fomba fiatrehan’ny olona tsirairay ny tahotra.
@litiantian : 有时候想，人在生活中总会遇到风险，比如车祸，比如癌症，与政府较劲也会死人，但车祸，癌症，政治迫害，到底哪种风险死亡率更高呢？我们是不是对风险低的事情过于胆小，对风险大的事情过于胆大了？–
Feno zava-mahatahotra ny fiainana, toy ny lozam-pifamoivoizana, ny homamiadana ary ny fiatrehana ny Governemanta. Na izany aza, inona amin’ireo telo ireo no tena mampatahotra raha eo amin’ny lafiny fahafatesana – ny lozam-piarakodia, ny homamiadana sa ny fanenjehana ara-politika? Moa ve tsy matahotra ny fiatraikan’ny fandraisana fanapahan-kevitra mirefarefa isika, nefa tena mety mivaingana be amin’ireo asa mihatra aman'aina?
Tamin’ny fotoana namoahana ahy, nahatsiaro tena ho toy ny nitsingevana teny amin’ny rivotra aho. Mandeha aho ary toa miha maivana izany.Taorian’ny nanaterana ahy tao Xinjiang, nantsoiko an-telefona ny sipako ary teo no nahalalako fa hay matetika notsidihan’ny polisy foana Izy. Notsidihan-dry zareo hatrany amin’ny orinasany koa aza, ary niresaka tamin’ireo anabavy sy rahalahin’io sipako io izy ireo ka namporisika azy ireo hiteny aminy hanoratra taratasy fisarahana. Nandà tsy hanoratra izany ilay sipako, ary nilaza hoe na dia ho tifirinareo ho faty aza TianTian dia tsy hanoratra zavatra tahaka izany aho.
Fangalana am-bavany mikasika ny fiainana ara-pananahana
Taoriana ny nitazonana ahy, dia nisava ny tranoko sy tao an-tranon’ny sipako ry zareo. Nokarohin-dry zareo daholo ny zavatra rehetra tao. Noteren-dry zareo ny sipako, ny rahalahiny ary ny anabaviny hijery video mampiseho ny sariko niaraka taminà lehilahy hafa niditra hotely.
Tsy tombotsoa ho an’ny sipako loatra ny hahafantatra izay olona niara nandry tamiko. Naneho bebe kokoa ny ahiahiny ireo polisy. Saron’izy ireo ireo lehilahy ary tadiavin’ izy ireo ny antonta tarartasy maneho amin’ny antsipirihany toy ny hoe, iza no nandoa ny volan’ny trano fandraisan-bahiny ? Iza no tompon-kevitra tamin’ny fanaovana firaisana ara nofo ? Impiry? Iza no nanadala an’iza ? Nasain’izy ireo nilaza ireny antsipirihany ireny aho.
Satria tena te-hahalala ny zava-nisy marina ry zareo ary izaho somary varimbarina, nomeko: raha tena tianareo ho fantatra, afaka antsoinareo mankaty ireo lehilahy ireo, ary afaka averiko ho anareo indray mba ho raiketinareo. Nilaza ry zareo fa tsy tsara noho ny video natao ho an’ ny olon-dehibe izany ary voarara ny fanaovana izany.
Menatra ihany aho ny hanoratra momba ny firaisana ara-nofo amin’ity taratasy ity saingy hijaly kokoa aho raha tsy mamoaka ny ato anatiko. Nandritra ny fanadihadhana, somary nanao vazivazy mihintsy aza aho mikasika io, nefa aho mahatsiaro tena ho afa-baraka tanteraka, na dia nodarohana aza aho dia nitsiky hatrany sady nilaza fa tsy nahatsiaro narary akory aho. Tena malemy tanteraka. Mbola tena mavesatra amiko ny lanjan'ny tahotra.
Soa ihany, tsy nandatsaka aho na ranomaso iray aza nanoloana ireo polisy. Nahafehy tena koa aho. Nilaza koa aho, fa raha tsy mahazo mpisolo vava aho dia, tsy hametraka velivelyny anarako ao anatin’io antontan-taratasy fiaikena io, nanontany ahy ilay polisy raha nila daroka aho. Nitsangana teo anoloako ilay mananboninahitra ary te hidaroka ahy mafy mihitsy. Mitandrema kely hoy aho fa ho kakeriko ny sofinao sy ny tendanao. Nosintoniny ny voloko sady norahonany hokapohina tamin’ny baoritra aho.
Alohan’ny hikapohany ahy tamin’ilay baoritra dia hoy aho : hikapoka ahy tokoa ianao. Azoko, matahotra aho, tsy maintsy hifanaraka amin’izy ireo aho sady tsy hanontany na inona na inona. Tena hentitra ianao. Hivalandrano sady hotsaka eto ny patalohako. Tena nila trano fivoahana maika aho. Nilaza ilay manamboninahitra fa hofatorany amin’ny tady vy sy hidiany ao anaty trano èty aho rehefa tsy mety hifanarahana. Nandray ireny kobay fikapohan'ny polisy ireny ilay manamboninahitra sady nanome baiko ilay mpiambina hikapoka ahy raha ilaina.
Niezaka mafy aho nampitony ny saiko sao lasa adala eo. Im-pito na im-balo aho no saika nidaraboka tamin’ny tany. —dia izay izany, olana tsy dia manao ahoana ny tsy fisian'ny varavarankely. Saino fotsiny ireo tamin’ny revolisiona ara-kolotsaina ireny, tsy misy dikany ny zavatra atrehako ankehitriny. Izany no fomba ataoko hankaherezan-tena mba hisakanako ny saiko tsy ho reraka sy ho kivy.
Manosika ny tahotra manoloana ny fandrabirabiana ara nofo
Hoy izy ireo hoe: Manana hetahetam-pilàna ara-nofo matanjaka ianao; tsy ampy anao ny indray mandeha; mila indroa ianao amin’ny fotoana iray ? Namaly aho: vehivavy eo amin’ny faha efapolo taonako aho. Misy fteny mikasika ny [filàn'ny ] vehivavy eo amin’ny 30 sy 40 taona; sa tsy izany? Manaraka izany, ny lehilahin'i Shangai tsy dia mahavita an'izany. Raha tsy tia tena ny lehilahy, mandeha ho azy ny firaisana ara-nofo. Kanefa rehefa tsy alehany ny ataon-dry zalahy, tsy maintsy mamerina manao iny indray izy. Fantatrao ve hoe maninona ny vehivavy eto Shanghai no tsy refesi-mandidy? Satria ny lehilahy ao Shangai dia tia tena sady tsy kaondrana, tsy afaka ny manome fahafaham-po ny vehivavy. [Fanamarihan’ny mpadika teny: ireo mpitandro filaminana avy amin'ny polisy dia avy ao Shanghai]
Polisy 2 na 3 no nanadina ahy.tamin’io fotoana io. Rehefa momba ny maha-lahy na ny maha-vavy no resahana, dia miantso mpiambina roa fanampiny izy ireo ka ny iray vehivavy ny iray lehilahy, hiditra ao amin’ny efitrano fakàna am-bavany. Efatra teo no isan-dry zareo nanontany ahy momba ny fiainako ara-pananahana. Tsapako ho hafahafa be aho. Hoy izy ireo : Tena taitaitra be ianao, maty eo ianao raha manao firaisana amin’izao. Eny hoy aho namaly, avelao hivoaka amin’izay aho .
Indray mandeha aho nitondra voankazo maina ho an’ny iray tamin’ireo mpanao firaisana amiko. Tao anatin’ny fanadihadian-dry zareo koa io. Fantany ihany koa raha nidinika ny momba ny hetsi-panoherana Jasmine tamin’ireo lehilahy ireo aho. Tsy horaisinareo ho takalom-piraisana ireo voankazo, sa tsy izany? hoy aho nanontany.
Fitadiavana fifandraisana ara-tsosialy
Nasain’ny Polisy nanoratra izay olona rehetra fantatro tamin’ny alalan’ny Aterineto aho. Anarana teo amin’ny 30 no nosoratako, ao anatin’izany ireo izay nihaona tamiko tao Beihai. Nanontany ahy ny tena fomba nahafantarako marina azy ireo ry zareo, sy ny fomba nifandraisanay. Tsy maintsy nosoratako tamin’ny antsipirihany ny zava-drehetra. Afa-po izy ireo ary niangavy ahy hanoratra amin’ny ambangovangony ny momba an’i Ai Weiwei, Liu Xiaoyun ary Tien Bao. Nosoratako daholo ny zava-nisy fantatro .
Talohan’ny niakarako tao anaty fiaramanidina, nomen’ilay lehiben’ny polisy ahy ny antontan-taratasy fikaretana ary niangavy ahy izy hamotipotika azy io avy eo. Tsy nanao izany aho. Nanontany azy aho teny an-dalana handray fiara-manidina raha tiany ny asany. Nambarany fa tsy maintsy manao io izy mba hamelomany ny fianakaviany. Mety ho sarotra izany hoy aho ary naniry ahomba ho ela velona ny governemanta arovan’izy ireo fa raha tsy izany mety hiatrika koa ny zava-manahirana mitovy amin’izay atrehako amin’izao izy. Nanamarina ny pasipaoroko aho avy eo ary nikopa-tànana azy. Nandrakitra ahy tanaty horonantsary izy ho porofon'ny niarahany dia tamiko hatreny amin’ny fiaramanidina.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/05/31/18014/
 hetsi-panoherana Jasmine: https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/2011_Chinese_protests
 @litiantian: https://mg.globalvoices.org http://twitter.com/#!/litiantian/status/74136157671260162
 @litiantian: https://mg.globalvoices.org http://twitter.com/#!/litiantian/status/74139782703353856
 @litiantian: https://mg.globalvoices.org http://twitter.com/#!/litiantian/status/74146073811230720
 @litiantian: https://mg.globalvoices.org http://twitter.com/#!/litiantian/status/74335741357985792